गम्भीर अवस्थाका पारस शाहलाई भेट्नसम्म किन आएनन् ज्ञानेन्द्र र श्रीमती हिमानी? – PathivaraOnline
Home > स्वास्थ्य > गम्भीर अवस्थाका पारस शाहलाई भेट्नसम्म किन आएनन् ज्ञानेन्द्र र श्रीमती हिमानी?
गम्भीर अवस्थाका पारस शाहलाई भेट्नसम्म किन आएनन् ज्ञानेन्द्र र श्रीमती हिमानी?
admin February 1, 2019 February 1, 2019 स्वास्थ्य 0
काठमाडौं । पूर्वयुवराज पारस शाह ४ दिनदेखि गम्भीर अवस्थामा नर्भिक हस्पिटलमा उपचाररत छन् । तेस्रोपटक हृदयघात भएपछि अस्पताल भर्ना भएका उनलाई एन्जियोप्लास्टी तथा स्टेन्ट प्रत्यारोपण गरिएको छ ।डाक्टरहरुले उनी अझै खतरामुक्त नभइसकेको बताइरहेका छन् । पारस अस्पतालमा उपचाररत रहँदा उनका बुबाआमा र पत्नी साथमा छैनन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमल गत आइतबार मात्र एक महिने भ्रमणका लागि सिमरा पुगेका थिए पत्नी हिमानी भने थाइल्यान्डमा छिन् ।छोरा बिरामी भएको खबर सुनेपछि पूर्वरानी कोमल सोमबार रातारात गाडीबाटै काठमाडौं आइन् तर, पूर्वराजा भने आएनन् ।
तेस्रोपटक हृदयघात हुनु खतरनाक अवस्था हो । यस्तोमा ज्यान जोगिने सम्भावना निकै न्यून हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसपालि पारसको मुटुका दुबै भल्व बन्द भएकाले जटिल अवस्था थियो तर, उनी भाग्यमानी सावित भए । लगभग माया मारिसकेको अवस्थाबाट उनलाई प्राडा. यादवदेव भट्टको टोलीले बचायो । अहिले उनको अवस्था सुधारोन्मुख त छ तर ७२ घन्टासम्म केही भन्न नसकिने डा. भट्टले बताएका छन् ।
छोरा यसरी मृत्युसँग लडिरहँदा हवाई मार्गबाट आधा घन्टाको दुरीमा रहेका बाबु ज्ञानेन्द्रले अस्पताल आउने जाँगर नचलाउनु उदेकलाग्दो देखिन्छ । यति मात्रै होइन, पूर्वरानी कोमल पनि छोरालाई सोमबार राति भेटेर के-के न बिते झैं गरी भोलिपल्टै जहाज चढेर सिमरा फर्किसकेकी छन् ।यतिबेला यी बाबुआमाको
सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता र चिन्ता छोराको स्वास्थ्य हुनुपर्ने हो । उनीहरुले तत्काल सिमराको भ्रमण रद्द गरेर दुवैजना काठमाडौं आउनुपथ्र्यो र छोराको रेखदेख गर्नुपर्थ्यो बाबुछोराको सम्वन्ध त्यति सुमधुर थिएन होला । पारसका गलत क्रियाकलापहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पहिल्यैदेखि उनीसँग सन्तुष्ट छैनन् ।
पारसका विभिन्न हर्कतले राजसंस्थालाई नै बदनाम तुल्याउने गरेका छन् । तर, जेजस्ता भए पनि सन्तान भनेको सन्तान नै हो । माया भई नै हाल्छ । यदि पारसको ज्यान तलमाथि भएको भए ज्ञानेन्द्रले फेरि उनको अनुहार देख्न पाउने थिएनन् ।०७२ सालमा पारसलाई हृदयघात हुँदा पूर्वराजा आफैं खाना लिएर अस्पताल पुगेका थिए । कोमल र हिमानीले उनलाई दिनभरी अस्पतालमा रुँगेका थिए ।
यतिबेला पारसकी पत्नी हिमानी थाइल्यान्डमा छिन् । त्यहाँ पढाउन राखिएका दुई छोरीहरु पूणिर्का र कृतिकाको हेरचाहका लागि उनी गएकी हुन् पारस र हिमानीको सम्वन्ध बिग्रेको धेरै भयो । हिमानीजस्ती पत्नी हुँदाहुँदै पारसले थाइल्यान्डमा थाइ युवतीसँग प्रेम गर्न पुगे । अघिल्लोपटक हृदयघात हुँदा पारसलाई तिनै प्रेमिकाले अस्पताल पुर्‍याएकी थिइन् ।
त्यतिबेला पतिको हेरचाह गर्न हिमानी नेपालबाट थाइल्यान्ड पुगेकी थिइन् । तर, यसपालि थाइल्यान्डबाट नेपाल आउन भ्याएकी छैनन् ।अस्पतालको शैयामा रहेका छोरालाई आमा-बाबुले निधारमा हात राखिँदिदा पनि ठूलो उर्जा प्राप्त हुन्छ । पत्नीले हात मुसारिदिँदा पनि आत्मबल पैदा हुन्छ । पारसलाई सम्भवतः यसको खाँचो छ ।पारसका
छोरा हृदयन्द्र सानै छन् । बरु उनले बाबुको रेखदेख गरिरहेका छन् । उनी दैनिक अस्पताल धाउँछन् र बुवासँग समय बिताउँछन् । निकटवर्तीहरूका अनुसार छोराछोरीहरु पनि बाबु भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् ।त विभिन्न जमघटहरुमा पारस र हिमानी सँगै देखिएका पनि छन् । तर, उनीहरुको बडी ल्यांग्वेज हेर्दा अहिले पनि सम्वन्ध सुधार नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।
पारसलाई अस्पतालमा बहिनी छोरा हृदयन्द्र, बहिनीहरु प्रेरणा, शीताष्मा, दिलाशा, पूजा, ज्वाईं राजीव शाही लगायतले हेरचाह गरिरहेका छन् राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा सरकारका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरु पारसलाई भेट्न गएका छैनन् । राजावादी नेताहरु कमल थापा र पशुपतिसमशेर जबराले भने उनलाई भेटेका छन् ।
बेलायतमा कोरोनाबाट मृ त्यु हुनेको संख्या घट्यो
दुखद खबर: कलाकार हरिवंश आचार्य दम्पत्तिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि